Ethiopia’s new leader makes rare outreach to opposition – Kichuu
HomeNewsAfricaEthiopia’s new leader makes rare outreach to opposition
ADDIS ABABA, Ethiopia (AP) – Ethiopia’s new prime minister is making a rare outreach to opposition parties, calling on them to prepare for “peaceful dialogue and negotiations” in an effort to broaden the political space.
#FBC-Dr. Abiy Ahmed Ali-Garuu waan dubbataa jiru kana bor ittan gaafatama jedhee yaadaa hinjiru laataa? Hundumaafuu, haasaan paartilee mormitootaa faana yeroof akkana godhachuun kun xumurasaa ilaalla
DR ABIY BAREEFAMA malee guyyaa sammuu isaa irraa haasahuu yoom argina.
Moo barreefama TIGROOTA qofaa dubbisuuf dhaabbaattee..?
Paartileen Mormituu 4kiloo mariidhaf seenan jedhamaa jira. Marii isaanii keessatti Qabxiilee Gurguddaa lameen eeraman kana irratti akka haasa’amu abdii qabna.
1) komishinii yakkoota amma dura ummata nagaa gaaffii mirgaa gaafatu irratti ajjeechaa fi gaaga’ama raawwatame qoratu hundeessuu
2 ) Filannoo as deemu dimomiraatawaa taasisuf Boordii filannoo Xuraawaa kana dura ture diiganii haaraya ijaaruu
FILANNOON BIYYOOLESA Xophiyaa waggaa TOKKOF achii dheerefamuun isaa TPLF jabeefachuuf malee sababbii birootiifis miti.